Cali Khaliif Galaydh Iyo Gacanyahiisa Ubax Olal Oo Ka Soo Muuqan Doona Meel Kulmisay Isaaq iyo Samaroon Dhaqaalana loogu Yaboohaayo Qabsashada Tukaraq |
Waxaa Wadanka Maraykanka Gaar Ahaan magaalada Minneapolis ee Gobolka Minnesota caawa Kasoconaya Qaban qaabada Xaflad Cali khaliif galaydh Ka soo Qeyb galaayo oo Lagu taageeraayo dhaqaalona aruuris loogu sameenaaya maleeshiyaadka isaaq ee qabsaday Tukaraq islamarkaana lagu Weerarayo Isimada SSC iyo maamulka Puntland.
Xaflada waxaa Soo qaban qaabiyay gacan yarahiisa khaas ka ah Ubah Abdi Olal iyo Xubno ay Isku beel yihiin cali khaliif galaydh.
Waxaana Ku casuuman oo soo xaadiri doona Dhamaan jaaliyadda beesha isaaq iyo jaaliyadda Samaroon ee falaagada ah ee maamulka Somaliland Urabaysan iyo Xubnaha dhulbahante ee cali khaliif ka taageersan Minneapolis .
Ujeedka Xafladan ayaa ah in Lagu beer Abuurto jaaliyadda Muga weyn ee Reer Khaatumo Laguna Sheego in maamulka isaaq iyo qorshaha Cali ay taageersan yihiin jaaliyadu.
Cali khaliif oo dalka Laga soo baaciyay kuna fashilmay gacan galinta Buuhoodle ee Somaliland ayaa haatan usoo wareegay dibada isagoo Gacanyarashiisa iyo qaraabadiisa kumaa weelinaaya inuu ugu abaal gudidoona NGO’s iyo mashaariic waaweyn markey Somaliland yimaadaan si eeysan ukala joogsan xaflado been abuur ah oo isaaq u camiraayo.